Qarax Ka Dhacay Degmada Buur-hakaba Ee Gobalka Baay. – Calamada.com
Qarax Ka Dhacay Degmada Buur-hakaba Ee Gobalka Baay.
calamada May 6, 2016 1 min read
Wararka ka imaanaya degmada Buur-hakaba ee gobalka Baay ayaa sheegaya in saacadihii lasoo dhaafay qarax uu ka dhacay degmada oo qeyb ka ah goobaha askarta Xabashida Itoobiya iyo maleeshiyaatka dowlada Ridada federaalka kaga suganyihiin gobalada Baay iyo Bakool.
Qaraxa waxa uu sigaar ah kaga dhacay goob ay ku qayilayeen maleeshiyaat ka tirsan Ridada oo ku taala gudaha degmada’iyadoona dhawaaqa qaraxa laga maqlay qeybo badan oo ka mid ah xaafadaha degmadaasi.
Idaacada Islaamiga ah ee Andalus oo soo xiganeysa saraakiil ka tirsan Mujaahidiinta ayaa baahisay in qaraxaasi ay ku dhaawacmeen labo askari oo ka tirsanaay maleeshiyaatkii goobta qaraxa ku qayilayay.
Sidoo kale qaar ka mid ah dadka deegaanka oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in mid ka mid ah labada askari uu dhaawiciisa culusyahay’iyadoona maleeshiyaatka dowlada qaraxa kadib muddo ay hakad galiyeen dhaqdhaqaaqii dadka iyo ganacsiga ee degmadaasi.
Previous: Dhageyso Warka Subax Ee Andalus 29-07-1437 Hijri.
Next: Dhageyso Warka Duhur Ee Andalus 29-07-1437 Hijri.